Saadaasha Cimilada Adduunka | Save A tareenka
Saadaasha Cimilada Adduunka
Home > Saadaasha Cimilada Adduunka
Saadaasha hawada adduunka oo dhan – Qalabka cimilada – Goobaha cimilada – Khariidadda cimilada – Macluumaadka hawada
Saadaasha Celsius Iyo Fahrenheit
Saadaasha Hawada Dunida waxay ku taal Celsius iyo Fahrenheit labadaba, fadlan sabir inta qalabka cimilada hoose culeys ka muuqdo oo isticmaal astaamaha weyneeyaha 🔍 ee geeska kore si aad uga raadiso goobo cimilo kala duwan waadna isbadali kartaa inta udhaxeysa Celsius iyo Fahrenheit.
Abriil 12 2021, Isniinta
Waxaan rabaa in aan u helo cimilada in °C°F .
Waad ku jiidi kartaa tilmaanta jiirkaaga khariidada Cimilada ee hoose una guuri kartaa meel kasta oo adduunka ah, waxaad arki doontaa jihada dabaysha iyo faahfaahinta kale sida darajooyinka cimiladeed ee hadda jira.
Intaa waxaa dheer, sidoo kale waxaad u isticmaali kartaa bar siibada hoose ee daaqadda si ay waqtiga beddel oo waliba ku soo dhawaada oo ku soo dhaway kumbuyuutarkaaga jiirka.
Markaad aragto magaalo ay dantaadu tahay, waad gujin kartaa magaca, waxaadna heli doontaa macluumaad cimilo faahfaahsan oo ku saabsan xaaladaha magaaladaas.
Bonus: top 10 Cimilo aan caadi ahayn Phenomena
Waxaan helnay fiidiyow aad u fiican si aan kuu tusno qaar ka mid ah ifafaalaha cimilada ee cajiibka ah ee aan ka mid ahayn saadaasha hawada ee caadiga ah.
Waxaan sidoo kale jeclaan lahayn inaan ka talo bixinno su'aasha guud, Saadaasha hawadu ma saxbaa?
Nolol baa jirta oraah, in kaliya 2 waxyaabaha nolosha ka mid ah ee la damaanad qaado ayaa ah inaad bixin doonto cashuurtaada oo aad aakhirka dhiman doonto, inta kale oo dhan lama hubo.
Si kastaba ha ahaatee, si loo saadaaliyo saadaasha hawada adduunka oo dhan, khubarada saadaasha hawada, isticmaal moodooyinka xisaabta, kuwaas oo si sax ah u sax ah, laakiin iyagu waa bini aadam waana ku khaldami karaan xaaladaha daran, ama xaalad isbeddel cimilo ah oo lama filaan ah.
Waxaan rajeyneynaa inaad ka heshay qalabkayaga Cimilada iyo haddii aad jeclaan lahayd, waanu faraxsanaan lahayn hadaad isticmaasho degelkeena si aad u hesho Qiimaha Tigidhada Tareenka ugu Fiican, kaliya si ay u tagaan Save A tareenka.
Ma rabtaa in aad Cudarada this page gal goobta, kaliya halkaan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fweather-forecast%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)